FAALO-Shacab iyo Dowlad Isjecel Yaan Layska Horkeenin.
July 10, 2017 - Written by Kulmiye
Banaanbaxyo Nabadeed oo lagu taageersan yahay Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa gilgiley Magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo dalka gudihiisa iyo debaddiisa ah, waxayna dadkaasi dhamaantood isla qireen in lasoo doortay Madaxwayne waqtigiisii kasoo hormaray, waxayna taasi daliil u ahayd in la helay Baarlamaan meteli katra shacabka Soomaliyeed ee dulmanaa ku dhowaad 30 sano.
Iyadoo sidaasi jirto ayey hadana Dowlada Federaalku ku dhaqaaqday tilabooyin waxqabad gudaha iyo debedda oo dhamaantood raali geliyey dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada u oomanaa sida bixinta Mushaaradka Ciidamada kala duwan iyo Shaqaalaha Dowlada iyo weliba wadaxaajoodyo ay la gashay dalaL sedax ah oo ay ku xiran yihiin Maxaabiis Soomaaliyeed si loo sii daayo, waxaana hadalkii ugu horeeyey kasoo yeeray Dowlada Itoobiya oo shaacisay iney si daynayso ka badan 100 maxbuus oo Soomaali ah oo ku jirey Jeelasha kala duwan ee Magaalooyinka Itoobiya, waxaana xiga Jasiiradaha Shiishalis iyo Muriishiyoos oo ay ku xiran yihiin Dhalinyro ku eedaysan Burcad Badeednimo.
Iyadoo sidaas loogu faraxsan yahay dadaalada ay wado Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa mar qura uun soo yeertay halaga baxo dhulka Dowlada ee la degan yahay ee u dhexeeya labada Ex. Koontarool ee Magaalada Muqdiho waxaana sidaasi baahinayey baabuur sameecado cod dhaadheer lagu soo xiray oo dhex xulayey min Warshadda Baastada, Gubta, Shiirkolo, Dayniile ilaa Jamacadaha waxaana waardiyeynayey gawaari tikniko ah.
Mar qura ayaa waxa is qabsaday Magaalada Muqdisho Banaanbaxyo lagu diidan tahay hadalka soo yeeray oo aan si sax ah uga soo bixin Dowlada Federaalka Soomaaliya, waxa uuna Banaanbaxaasi sababay in la xanibo isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana ugu darnaa Wadada Tarabuunka.’
Hadaba sidee ayey ahaayeen Jawaabaha ay bixinayeen dadka Soomaaliyeed qaarkood oo ku nool Magaalada Muqdisho, waxay ka bilaabatay Baska Gudihiisa. Ninkii hadalka bilaabay ayaa yiri. “Dowlada gacmo furan ayaan kusoo dhowayney welina waa dowladeenii laakiin hadda anigu kama filayn guryo Dowlo halaga baxo, sababtoo ah waxaa ka horeeya gurya ka bixidda waxyaabo badan” ninkii waa sii hadlay oo waxa uu yiri “Waxa ka horeeya Amaanka oo si wanagsan loo sugo lana helo xasilooni lagu naaloodo” mid kalaa hadalka qaatay waxa uuna yiri “Dowladaan haday bilowday guryaha halaga baxo saan ugu lisnay nooguma hambayn, sababtoo ah waxaan hubaa in aan la gaarin waqtigaas oo aad loo degdegey, tanina waxay abuuraysaa shaki badan”.
Gabar dhalinyaro ah oo meel dhexe fadhidey ayaa soo boodey oo tiri. “Anigu waxaan u malaynayaa in la doonayo in la iska horkeeno Dowladda iyo Shacbka is jecel” iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey sii raacisay “ Anigu waxaanba ka shakiyey Baabuurka naadinaya in guryaha laga baxo cidda soo dirtay” “maxaa warkan naga caraysiiyey si wanagsan loogu shaacin waayey” ayey hadlkeedii kusoo gebagebaysey.
Darawalkii gaariga ayaa hadalka qaatay waxa uuna yiri. “Guryaha Dowlada hala baxo waxaa ka horeeya in shaqo abuur loo sameeya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada”. “Darawal adaa hadalka ku watee waxaan Dowladaan ka sugayney iney soo celiso Hantida muuqata ee la dhacay sida Kaalimihii Shidalka, Jardiinooyinkii, Iskuuladii, iyo Dhulalka Waraaqaha loo samaystay” sidaa waxaa yiri mid ka mid ah rakaabka gaariga oo markiiba degey.
Nin kale ayaa hadalka qaatay waxa uuna yiri. “Madax wanaagsan ama Dowlad wanaagsan waxaa lagu gartaa waxay leedhahay la taliye wanaagsan, marka waxaan u malaynayaa in Dowladdaan aaney lahayn lataliyaal wanaagsan” waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri. “ Sababtu waxa weeye haddii ay Dowladani leedahay ka taliyaal wanaagsaan maanta ma dhacdeen dhulka iyo guryaha Dowladda halaga baxo iyadoon dadka la jihayn”.
Mid kale oo dadkii ka qosliyey hadalkana soo qatimay ayaa soo boodey oo yiri. “Aniga waxaa iga su’aal ah Dowlad walba oo dalkan ka dhalata maxay u tiraahdaa Shiikolo halaga baxo” ninkii oo aad u moodo inuu yare caeraysan yahay oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri.”Ka soo bilow CabdulCasiis, Shangaani, Xamar Wayne, Wardhiigley waxaa ku yaal dhismayaaal Dowlo oo la haysto, waxaan garan waayey waxa guryahaas tusi waayey oo tusay Shiirkolo, Sheekada waxaan u arkaa “Miskiin ayaa Misko la Fuulo leh”.
Guntii iyo gebagebadii waxaa hubaal ah in Shacabka Muqdisho ay ka go’an tahay taageerada Dowlada Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee yaan la dayicin Shacabka Soomaaliyeed ee dulmanaa ka badan 25 sano oo yaaney sheekadu kusoo dhamaan “la mood noqonse waydey”.